Ebighebi Alaeze bụ ìhè na onyinyo atụmatụ egwuregwu | Gam akporosis
Ọ bụrụ na anyị na-enyocha Alaeze ebighebi bụ n'ihi nnukwu ọrụ ya na mmezu teknụzụ dị ka na visual. Egwuregwu mara mma n'echiche a nke na-akwụ ụgwọ iji merie ka ndị chọrọ ịme micropayments nwee ike ịga n'ihu ngwa ngwa.
Ọ bụ ezie na anyị anaghị ebipụta nyocha banyere ụdị egwuregwu ndị aNa nke a, a manye anyị etu esi eme ya. Egwuregwu atụmatụ nke anyị ga - emezi obodo anyị ma chee ndị egwuregwu ndị ọzọ ihu n'otu oge ahụ dị ka AI. Ka anyi jiri Infinity Kingdom mee ya.
1 Ahụkebe na imewe, echiche ọjọọ
2 Multiplayer na epic dragons na Infinity Kingdom
3 Paygwọ ịkwụ ụgwọ iji merie ọtụtụ ndị na-agbada
Ahụkebe na imewe, echiche ọjọọ
Egwuregwu nke ìhè na onyinyo ebe ọkụ Infinity Kingdom bụ naanị ọrụ pụrụ iche raara nye imewe na eserese nke usoro egwuregwu a. Ọ bụ naanị fabulous na niile etoju, ọ bụ ezie na ọ ga-kwuru na ya monetization ha agafeela; dị ka ndị dị otú ahụ ha na-anakọta nyocha ndị ndị egwuregwu ha nyere na peeji Google Play.
Njedebe Alaeze bụ a atụmatụ egwuregwu dị ka ndị ọzọ, anyị ga-emeziwanye obodo nke nnukwu ndọtị ebe anyị nwere ụdị ụlọ niile. Lọ ndị anyị kwesịrị ịrụ ma ọ bụ kwalite ka ha na-akuziri anyị site na nkuzi na mbido.
Ewepụghị onwe, ọ bụ egwuregwu na ọ dịghị ka m na-echepụta ihe ọ bụla, ma ekele ya oké imecha ọ ga-adọta ọtụtụ egwuregwu. Ọ nwere akụkụ ahụ nke ọgụ anyị ga-aga otu ụdị Agha iongha n'ime nke anyị na-ahazi ọnọdụ nke nkeji ha ga-abanye na-akpaghị aka megide onye iro ahụ.
Multiplayer na epic dragons na Infinity Kingdom
Infinity Kingdom anyị nwere 7 The Epic dragons na n'oge ụfọdụ anyị ga-enwe ike iteta. Ọ bụ otu n'ime akụkụ dị mkpa nke egwuregwu egwuregwu a nke anyị ga-akpọghe ngalaba ọhụụ yana ndị mmeri ahụ ga-eme ka ihe dịrị anyị mfe n'ọgbọ agha.
Na ngụkọta enwere 50 anwụghị anwụ bụ ndị ka mma ndị akụkọ ihe mere eme dị ka Cleopatra, Robin Hood na ọtụtụ ndị ọzọ. Akụkụ ọtụtụ egwuregwu ga-enye anyị ohere ịgwa ndị ọrụ ibe anyị ka ha nyere anyị aka ịgbachitere ala anyị, na, n'ezie, site na ịghara ịmekọrịta ụdị mmekọrịta ọ bụla na ọgụ ahụ, enyemaka ahụ kwuru ga-abụ nke enweghị atụ.
Egwuregwu nke nwere anwụghị anwụ ka mma ga-apụta na anyị nwere ike inwe ọganihu ngwa ngwa. Nke a bụ akụkụ kachasị njọ nke egwuregwu a nke anyị nwere ike ịmalite na mbido, mana ọ ga-efu anyị ọtụtụ ihe mgbe anyị na-aga n'ihu.
Paygwọ ịkwụ ụgwọ iji merie ọtụtụ ndị na-agbada
Enweghị egwuregwu ole na ole dị na-uru nke a mmewere na-adọta ndị egwuregwu na-atụfu kaadị na ndị bụ ndị na-ahụ maka nchekwa ụlọ ọrụ ndị a. Ma ọ bụ egwuregwu ahụ Brawl Stars wetara $ 1.000 ijeri n'ụlọ nchekwa Supercell na ego; Ka anyị ghọta ihe kpatara eji egwu egwuregwu ndị a na ọtụtụ egwuregwu.
Ka ọ were anya na teknụzụ ọ bụ naanị egwuregwu dị egwu. Pụrụ ịhụ na ha etinyewo ịhụnanya niile ga-ekwe omume ịnọ n’otu ọkwa dịka PC na egwuregwu njikwa. Ọ na-enweghị nkọwa na ntọala, atụmatụ nke odide na ụlọ yana na Spanish, ọ na-enyere ọtụtụ aka igwu egwu. Naanị na akụkụ a ka ọ nwere ike ikpuchi akụkụ gbara ọchịchịrị nke ịkwụ ụgwọ iji merie.
Infinity Kingdom dị n’efu na Storelọ Ahịa Play ọ ga-abụ egwuregwu a na-egwuri egwu maka nnukwu ọhụụ ọhụhụ. Ugbu a, ọ ga-ekpebi ma ị ga-anọgide na-egwu egwu ma ọ bụ na ị ga-aga ọzọ.
Ahụkebe na ngwụcha, mana site na ịkwụ ụgwọ ahụ ọ ga - emeri ọ ga - achụpụ ọtụtụ egwuregwu ọfụma.
Magburu onwe ya oru na visual mmepe na niile etoju
Nwere ike ịhụ ịhụnanya etinye n'ime egwuregwu ahụ
Lezienụ iji merie
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Mbanye Cleopatra, Robin Hood na ndị ọzọ na atụmatụ egwuregwu Infinity Kingdom